Kudzivisa: inotsanangura, mavara mavara, etc ...
Izvi zvingangodaro zvakaoma kupfuura zvese zvevatungamiri content writingNdokusaka ndiri kuenda kunopemha chimwe chinhu chakakosha sezvazvinogona uye kuti chakanakisa chinogona kuitwa. Iro zita rinokosha rakaiswa pakati pe2 uye 5 mazwi ari nani anoshamisa uye anodzokororwa akawanda muchinyorwa. Muenzaniso: kana chinyorwa chataura nezve "hutani hwevanhu muLa Coruña"Ipapo Iri rakagadzirwa nemashoko e5 anogona kunyatsosarudzwa kwezwi rinokosha remashoko acho. Muchokwadi, "chingwe chevanhu" chingakwana mumuenzaniso uyu. Kazhinji, chakanakira ndechekuti iro keyword chinhu chinowanzo tsvakwa nevanhu nevanhu paGoogle.
Shandisai Word Tracker tool: https://www.wordtracker.com/search (inofanira kuiswa muTeritory, Spain) Nezvo ine mhedzisiro, ndiko kuti 10 yekutsvaga, zvakwana. Kana kushandisa izwi risinganzwisisike, semuenzaniso: "rugare." Kana iwe usisakwanise kushandisa Wordtracker nekuti wapfuura muyero wekutsvaga, unogona zvakare kuedza Übersuggest.
Nenzira, ine mhedzisiro, asi yakaipa miedzo, pakati 10 uye 500 ichave yakanaka. Semuenzaniso: "nyika kufora" yakakwana, haina kunyanyisa kunaka nekuti inongova ne10, asi inokwana:
Uyewo Inokurudzirwa isa Subtitle muchikamu chiri pazasi Musoro mukuru uyo ​​unoti "Pinda subtitle apa".
Pakupedzisira, zvinofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti anochengetedza 3 (H3) anofanira kunge aine H2 pamusoro uye panofanira kuve neinenge 1 H2 inobata kuti ugare uchipa iro hutongi. H2> H3> H4.
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: Zvinenge zvisizvo nekuti H4 inofanirwa kutungamirwa neH3
H3 - H2: Zvinenge zvisizvo, nekuti H3 nguva dzose inofanirwa kutungamirwa neH2
H3 - H3 - H3: Zvinenge zvisizvo nekuti panofanirwa kuve neinenge imwechete H2
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3. Zvingave zvakanaka nekuti marongero enzvimbo anoremekedzwa.
** Kana iwe usingazivi kana une mbiri yakawanda kana kwete, pinda https://www.alexa.com/siteinfo uye isa iyo URL yesizinda, semuenzaniso "hoy.es".
Iro zita remufananidzo rinofanirwa kuve rakapusa, pasina "ñ" (chinja iwo ñ kusvika n), pasina masisitimu, uye kana paine nzvimbo, shandura iwo kuita mapundu.